कहाँबाट भित्रिन्छ बर्डफ्लु, किन हुँदैन नियन्त्रण ?
- रमेश भारती | मंगलबार, चैत २२, २०७८
एक दशकयता नेपालमा घरपालुवा चरामा बर्डफ्लु रोग महिनैपिच्छे फैलिने गरेको छ । जसका कारण मासिक ५ करोडभन्दा बढीको हाँस, ब्रोइलर, लोकल, गिरिराज, लेयर्स, टर्की, काग, प्यारेन्ट कालिज र लौकाट नष्ट गरिरहनुपरेको पोल्ट्री व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।
दशकयता नेपालमा बर्डफ्लु रोग महिनैपिच्छे फैलिँदै आएको छ । सरकारले नियन्त्रण गर्ने प्रभावकारी प्रयास नगरेको पोल्ट्री व्यवसायीहरूले आरोपसमेत लगाउँदै आएका छन् । गत माघदेखि प्रदेश १, मधेस प्रदेश, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा बर्डफ्लुको संक्रमण बढ्दो छ । हाँस, ब्रोइलर, लोकल, गिरिराज, लेयर्स, टर्की, काग, प्यारेन्ट, कालिज र लौकाटको व्यावसायिक पालन गरिरहेका मुख्य शहर मोरङ, काठमाडौं, सुनसरी, सिन्धुपाल्चोक, कास्की, उदयपुर, ललितपुर, भक्तपुर, पर्सा, मकवानपुर, धनुषा र बारासहित १३ वटा जिल्लामा बर्डफ्लु संक्रमण रफ्तारमा फैलिएको पशु सेवा विभागले जनाएको छ ।
गत माघयता बर्डफ्लुको संक्रमणकै कारण १ लाख ३५ हजारभन्दा धेरै हाँस, ब्रोइलर, लोकल, गिरिराज, लेयर्स, टर्की, काग, प्यारेन्ट, कालिज र लौकाट नष्ट गर्नुपरेको विभागले जानकारी दिएको छ । बर्डफ्लुको संक्रमण फैलिएसँगै ठूलो आर्थिक नोक्सानी भोग्नुपरेको र नियन्त्रणका लागि प्रयाससमेत भइरहेको पशु सेवा विभागका महानिर्देश डा. रामनन्दन तिवारीले बताएका छन् ।
गत माघ महिनायता बर्डफ्लु रोगकै कारण ८ करोडभन्दा धेरैको घरपालुवा चरा गाड्नुपरेको उनले बताए । ‘बर्डफ्लु रोगले व्यवसायी र अर्थतन्त्रमै घाटा भएको छ । यो रोग व्यापारसँग फैलिने गरेको छ । एक ठाँउबाट अर्को स्थानमा सप्लाई गर्दा बर्डफ्लु रोग सर्ने गर्छ,’ उनले भने, ‘मुख्य त खुला सिमाना भएका कारण भारतबाट यो रोग धेरै नेपाल भित्रिन्छ । भारतबाट दाना, कुखुरा र अन्य चराहरू दैनिक भित्रिन्छन् । जसका कारण धेरै जोखिम त्यहीबाट हो ।’
बर्डफ्लु रोग फैलिएसँगै सबै पोल्ट्री व्यवसायीहरूलाई सरकारले सचेत हुन र नियन्त्रणका लागि आग्रह गर्दै आएको छ । विभागले पोल्ट्री व्यवसायीहरूलाई समयमा नै सिल गर्न नमान्दा रोग फैलिने गरेको उनको भनाइ छ । विभागले बर्डफ्लु रोग नियन्त्रण गर्ने विभिन्न भन्सारमा क्वारेन्टाइन, परीक्षण र अन्य उपाय अपनाउँदै आएको जनाएको छ ।
पूर्वतयारी नहुँदा नोक्सान
नेपाल पोल्ट्री महासंघका महासचिव दिनेशराज मिश्रले नेपालमा फैलिने बर्डफ्लु रोगका कारण व्यवसायीहरूले ठूलो क्षति ब्येहोर्दै आएको र सरकार पूर्वतयारी गर्न चुकेको आरोप लगाएका छन् ।
सरकारले भन्सारमा राम्रो जाँच नगर्दा नेपालमा बर्डफ्लु रोगको प्रकोप बढिररहेको उनले बताए । ‘भारतलगायत देशबाट नेपाल भित्रिने हाँस, ब्रोइलर, लोकल, गिरिराज, लेयर्स, टर्की, काग, प्यारेन्ट, कालिज र लौकाटको जाँच नगरी पास गरिन्छ । जसका कारण यो रोग नेपालमा बढ्दो छ,’ उनले भने ‘सरकारले बर्डफ्लु रोग नियन्त्रण गर्न औषधि, चित्किसक र अन्य उपायका बारेमा पूर्वतयारी राम्रो गर्दैन । जसका कारण बर्डफ्लु रोग नियन्त्रणबाहिर गएर फैलिइरहेको छ ।’
सरकारी बेवास्ताका कारण पनि बर्डफ्लु रोग फैलिँदा कतिपय पोल्ट्री व्यवसायीहरू विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ । बर्डफ्लु रोग नियन्त्रणका लागि दाना ढुवानी, हाँस, ब्रोइलर, लोकल, गिरिराज, लेयर्स टर्की काग, प्यारेन्ट कालिज र लौकाट आयात र निर्यातमै केही समय रोक लगाउनुपर्ने पोल्ट्रीविज्ञ एवं नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनाका निर्देशक डा. उमेश दाहाल बताउँछन् ।
‘रोकथामका लागि पहिले नै आयात रोक्नुपर्ने हो । अब सिल नै गरेर नियन्त्रण गर्नुपर्छ । नत्र नेपालमा बर्डफ्लु रोगले सोचेभन्दा धेरै क्षति पुर्‍याउँछ,’ उनले भने, ‘पोल्ट्री व्यवसायीहरूले पनि यो रोग नियन्त्रण गर्न आफैँ सचेत हुनुपर्छ । पोल्ट्री व्यवसायीले बेवास्ता गर्नाले उनीहरूले नोक्सानी ब्यहोर्दै आएका छन् । यो राम्रो पक्ष होइन ।’
क्षति न्यूनीकरणका लागि भ्याक्सिनेसनमा जोड दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । नेपालमा २०६५ सालयता बर्डफ्लु रोगका कारण करिब डेढ करोडभन्दा धेरै चरा मार्नुपरेको विभागले जनाएको छ । नेपालमा बर्डफ्लु रोग हरेक तीन महिनामा फैलिने गरेको छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत २२, २०७८, १८:१७:००